यस्ता लक्षणहरु देखिए तत्काल जचाउनुहोस् मिर्गौंला.. – Annapurna Post News
April 20, 2022 sujaLeaveaComment on यस्ता लक्षणहरु देखिए तत्काल जचाउनुहोस् मिर्गौंला..
पछिल्ला वर्षमा वर्षेनी मिर्गौ’लाका बिरामी बढिरहे’का छन् । कतिपयले त नियमित चेकजाँच नगर्ने हुँदा मिर्गौ’लामा समस्या देखिएको निकै पछि मात्र आफूलाई मिर्गौलाको रोग भएको थाहा पाउँछन् ।
तर, जब थाहा हुन्छ, त्यति बेला मि’र्गौला निकै बिग्रिस’केको हुन्छ । त्यसो हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ, मिर्गौला ठिक छ वा छैन भन्ने कसरी थाहा पाउने त ?
यी लक्षणले चाहिँ कतै मि’र्गौलामा समस्या त छैन भन्ने थाहा दिन्छ । योसँगै नियमित चेक:जाँच गर्नेहरुले चाहिँ चिकित्स:कलाई आफूलाई भएका समस्याबारे बताउनु पर्ने हुन्छ ।
-यदि छिटो थकाइ लागेको महसुस हुन्छ, काममा एकाग्रता हुँदैन-मिर्गौलामा समस्या देखिएमा हाम्रो शरीरमा टक्सिन’हरुको विकास हुन्छ जसले हाम्रो रगतलाई पूर्ण रुपमा अ’क्सिजन शरीरका अंगहरुमा पुर्याउन दिँदैन । मिर्गौ’लामा समस्या हुँदा बिरामी’मा अनेमिया पनि देखिन सक्छ ।
-निद्रा लाग्दैन वा सुताइमा समस्या छ-जब मिर्गौलाले राम्रो’सँग काम गर्दैनन्, हाम्रो शरीरले आराम महसुस गर्न सक्दैन । यसले गर्दा हामीलाई निद्रामा स’मस्या देखिन सक्छ । तौल बढ्नुसँग पनि मिर्गौ’ला रोगको सम्ब’न्ध हुन्छ । जे होस्, राती निद्रा पर्न गाह्रो हुन्छ वा निद्रा राम्रो पर्दैन भने पनि हामीले मिर्गौ:ला जचाउनु पर्छ ।
-सुख्खा र छाला चिलाइरहने-राम्रा मिर्गौलाले राम्रो का’म गर्न सक्छ । मिर्गौलाले हाम्रो शरीरलाई आवश्य’क नपर्ने फोहोरहरु हटा’उन सहयोग गर्छ । तर, यो फोहोर हाम्रो रगतमा आयो भने हाम्रो छाला सुख्खा हुन्छ र चिला’इरहने हुन्छ । यस्तो भएको खण्डमा पनि मि’र्गौला जाँच्नु ठिक हुन्छ ।
– बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ-यदि तपाईंलाई बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ र यो क्रम रातीमा झन् बढी हुन्छ भने मिर्गौला प’रीक्षण गरिहा’ल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त कहिलेकांही यो प्रोस्टेटका कारण पनि हुनसक्छ तर यस्तो सम:स्या चाहिँ सबैभन्दा बढी मिर्गौलामा स’मस्यामा देखिएमा हुन्छ ।
– पिसाबमा रगत देखियो वा फिँजज’स्तो पिसाब भएमा-मिर्गौलाले खासमा पिसाब’मा हाम्रो शरीरमा अनावश्यक कुराहरु मात्र पठाउँछ । तर, पि’साबमा रगत देखियो भने वा पिसाब फिँजजस्तो आएमा तत्काल जचाउनु पर्छ । किनकि यसले मिर्गौ’लाको ग’म्भीर समस्या इंगि’त गर्छ ।
-खुट्टाहरु सुनिएको छ-खुट्टाहरु अस्वा’भाविक रुपमा सुनि’एको छ भने पनि त्यो मिर्गौलाको समस्या हुनसक्छ । त्यसैले गोलीगाँठा त’था खुट्टा सुनिएमा मिर्गौलाको चेकअप गरिहाल्नु पर्छ ।
श्रीमान-श्रीमती बीच सेक्स नहुँदा पनि पिसाबको समस्या हुन सक्छ: डा. दीपक रौनियार (भिडियो)